Nepali Rajneeti | “पार्टी कार्यालय,संसद भवन, बालुवाटार,होइन अस्पतालहरुमा जाउ नालायकहरु हो,जनता चपेटामा छन्” – रबि लामीछाने
“पार्टी कार्यालय,संसद भवन, बालुवाटार,होइन अस्पतालहरुमा जाउ नालायकहरु हो,जनता चपेटामा छन्” – रबि लामीछाने
बैसाख २९, २०७८ बुधबार ५८५ पटक हेरिएको
बौद्धिकता सौद्धिकता भाँडमा जाओस्, आज यो मनमा लागेको लेख्छु,आफ्नै ढंगले। पार्टी कार्यालय,संसद भवन, बालुवाटार,खुमलटार होइन अस्पतालहरुमा जाउ नलायकहरु हो। जनताको भोट लिएर महामारीमा लुक्ने??
मध्य रातमा आपत परेका बिरामीहरुको चीत्कार सुन्न नसकेर निदाउन नसकेको कयौं रात भैसक्यो, तिमीहरू चाहिँ कसरी सुत्छौ नालायकहरु हो? तिम्रो सरकारको विश्वासमा कति, अविश्वासमा कति मान्छे संसदमा उभिए थाहा छैन र मतलबपनि छैन तर आज १३९ जना मानिस म’रे, अधि’कांश अक्सिजन नपाएर।
कहिँ कतै अक्सिजनको एउ’टा खाली सिलिन्डर छ भन्ने सुन्दापनि अमृत भेटिए जस्तो लाग्छ। यो देशको कुनै नेताको हिम्मत भए म सँग उसले रोजेको अस्पतालको गेट्मा भेटोस्।
यो महामारीमा मान्छेलाई मर्नु बाहेकको बिकल्प नदिएर, आफू मचाही भाग्ने, लुक्ने,सुत्ने?? अस्पतालको ढोका ढोकामा मान्छे रुदै र कराउँदै स्वास्थ्यकर्मीसँग ज्यानको भिख मागिरहेका छन्।अनि मर्न नसकेका, निकम्मा,मुला सुद्दी हराएका,कोरोना नआएको भए पनि सुइँकी सक्नु पर्ने नेताहरु चा’हिँ बे’फ्वाँकमा बाँचिईईईईईईईईईईईईई रहने??????
मेरो प्रस्ताव मान्ने?? अब यसो गरौं: प्रत्यक दिन बिहान ८ बजे आफुले भोट हालेको नेताको घरमा भेला हौं र भोटको जवाफ स्वरुप अक्सिजन मागौं। दिन नसक्ने नालायकको राजिनामा नमागी नफर्कौ। यति गर्न नसक्नेले अब क’म्तिमा पनि यो देशको अवस्था फेरिने आशा नगरौ!!! दुर्भाग्यवश मैले गत चुनावमा भोट हाल्ने सौभाग्य पाइन तर तपाईंले त भोट हाल्नु भो होला नी हैन?
तपाईं अस्पताल अस्पताल धाउदा तपाईंले भोट हालेकाहरु के गर्दैछन् यो महामारीमा? त’पाई छ्ट्पटाउदा के गर्दैछ्न् तपाईंको भोट पाउनेहरु??